Ny Kiakiak’i Gaza Manako Anaty Tontolo Iray Mangina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 7:43 GMT
Efatra volana. Palestiniana 247 no maty. Ny 155 tamin'izy ireo, olon-tsotra ”manampahefana”. Ny 57 ankizy. 996 naratra. 337 tamin'izy ireo dia ankizy avokoa. Manontany tena i Naseem Tarawnah raha tsy mandre intsony ny kiakiak'i Gaza izao tontolo izao.
Manampatra ny hatezerany toy izany koa i Eman, indrindra amin'ny tsy fisian'ny fihetsehan'ny Arabo, raha toa ka miantso ny Arabo hanao hetsi-panoherana kosa i Al Falasteenyia:
“…mila mihetsika isika, isika rehetra izay mijaly -paletsiniana, arabo, silamo, ny olombelona tsirairay izay maniry ny hiafaran'izao- ho an'ny malahelo aminareo izay mipetaka tsy misy farany eo alohan'ny vaovao foana, mifohaza eo ambony seza ary mikarakarà fiaretan-tory, hetsi-panoherana, na inona na inona, na aiza na aiza.”
Ny zava-nitranga tao amin'ilay ampahan-tany kely dia marina tokoa fa tsonami toy ny nolazain'i Haitham Sabbah.
Ary nisy fandripahana nitranga nandritry ny alina tao Beit Hanoun; fianakaviana iray manontolo no novonoina tao anatin'ny torimasony…
Tsapan'ny Desert Peace fa toa mitovy amin'ny an'i Krystalnacht ireo sary farany mikasika ilay fandripahana tao Beit Hanoun; moa ve miverina ny tantara?
Feo vitsy monja ihany avy ao amin'ny tontolom-bolongana no nivoaka avy tao Gaza fa mitazona antsika ho maharaka vaovao momba ny zava-misy ao Gaza foana ny lahatsoratra diary soratan'i Ef-Farra, ao anatin'izany ny sary manafintohina ahitana ireo zaza naratra tao Beit Hanoun.
Manana sary manelingelina momba ireo tra-boina toy izany ihany koa sy ny anaran'ireo iraika ambinifolo tao amin'ilay fianakaviana ringana tao anatin'ny alina iray tao Al-‘Athamneh i Adam Khalil ao Gaza.
Hoy i Naj: “‘Taorian'ilay fanafihana goavana tao Beit Hanoun … matahotra aho, nefa tena te-hahita mafy ny zavatra tavela tamin'ity tanàna mahonena ity aho.”
Noho ny fisian'ny tsy manantsiny maro maty dia fitakiana hanaovana fanadihadiana. Mankarary an’ i Laila El-Haddad ny fahenoana ireo nenina, fialantsiny ary fampanantenana poakaty hanadihady:
”Raha hiala tsiny ihany, ATSAHARO NY ADY ATAONAREO aminay. Hery sy hafanam-po maro nindaosan'ny fahafatesana sy fanimbàna ary fandringanana sy fanemporana ary fibodoana- vitsy no vonona ny hanajanona izany rehetra izany.”
Manome poezia nosoratan'i Mahmoud Darwish ho an'ny mpamaky azy i Laila, izay matetika ny asany dia milaza ny feo sy ny fihetsehampon'ny Palestiniana rehetra. Mampiasa ny poezia ao amin'ity sary andrana ity ihany koa i Um Khalil, izay maneho mazava tsara ilay fandripahana tao Beit Hanoun. Toa mifanentana amin'ity loza mahatsiravina ity ny Macbeth an'i Shakespeare:
”Mamono torimaso i Macbeth, ilay torimaso tsy manan-tsiny,
Torimaso izay mampifandray ilay tanan'akanjo voatenon'ny fiahiana,
Ny fahafatesana isaky ny andro tsirairay iainana, ny fandroana amin'ny asa mampijaly,
Menaky ny saina maratra, zotram-piainana faharoan'ny natiora lehibe,
Lehibe mpanao sakafo ao amin'ny fetin'ny fiainana (act ii; sehatra ii)
Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ilay toby fialokalofana ao Balata izay martiora eo amin'ny 350 eo no maty hatramin'ny niantombohan'ny intifada faharoa, miezaka ny hamita hosodoko peta-drindrina ho fahatsiarovana ny sorona nataon'izy ireny i Katie Miranada. Fa niankina tamin'ny Tafika Israeliana Mpibodo sy ny fandripahany mampihorohoro ao amin'ilay toby ilay tetikasa. Nampiandrasana ny kanto raha toa ka maty notifirin'ny Israeliana mpitily matihanina i Ibrahim, tovolahy 16 taona tsy nitam-piadiana izay niezaka ny hiaro ny zandriny naratra.
”Teo am-pamitàna ilay hosodoko aho dia naka sary ankizy tanora vitsivitsy nametaka ireo peta-drindrina martiora vaovaon”i Ibrahim. Fantatro teo amin'ny sary fa iray tamin'ireo ankizy nijery ahy nanao hosodoko ny andro talohan'io izy. Nanontany ahy izy raha nahita olona aho, tsia hoy aho, ary avy eo lasa izy. Maty izy ankehitriny .”
Sary : Fanomezana avy amin'i Katie Miranda
Na toa tsy misy dikany aza ny taona ho an'i Israely rehefa miresaka momba ny Tany Bodoina toa an'i Aiysha (izay midika «aina» amin'ny teny arabo), zaza 2 taona no teraka am-ponja Israeliana, vao avy novotsorana sy natolora ny rainy raha toa ka mbola «tazonina noho ny raharaham-panjakana» ny reniny, izay midika ara-teknika fa tsy misy fiampangana na fitsarana, fa zavatra tsy misy dikany bebe kokoa natao hisaintsainana fotsiny.
Any amin'ny sehatra hafa, Ibrahim Oweis, raha toa ka nitondra ny AnomalousNYC sy ny tetikasa keliny amin'ny sary sy peta-drindrina mampiasa sarin'i Palestina nokirakiraina sy novaina ny Flickering ‘Palestine’. Angona mendrika ny hojerena izany. Hanomboka tsy ho ela ihany koa ny tetikasan'i Ibrahim.